ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်း - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 22, 2014 at 12:28 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်နှုတ်ဆက်သည့်အခါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းသည်ပြုမြဲလောက၀တ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းသည် အတန်ငယ် စိမ်းသည့်သဘော၊ ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်သည့်သဘော၊ လုပ်ငန်းသဘောဆန်လှသည်။ ရင်းနှီးပြီးသား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးနှုတ်ဆက်ကြရာတွင်တော့ အခြားသော ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှုတ်ဆက်ပုံ နည်းလမ်းများ ရှိကြပါသည်။ ယင်းအလေ့အထများအား အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ဖူးကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ပို၍တိတိကျကျ သိလိုသူ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတို့အတွက် အောက်ပါစာပိုဒ်များဖတ်ရင်း ဘာသာစကားရော ဗဟုသုတပါ ချဲ့ထွင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။
This is an intimate way of saying hello, often used by good friends and family members. Place your arms around the other person and embrace them warmly. A hug is often accompanied byagentle pat on the back of the person you're hugging.
၄င်းသည် ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းအရင်းအချာနှင့် ဆွေမျိုးမိသားစု များကြား အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မိမိလက်များအား တစ်ဘက်သားအား နွေးနွေးထွေးထွေးသိုင်းဖက်ပါ။ ပွေ့ဖက်ခြင်းတွင် ပုခုံးအားပုတ်၍နှစ်သိမ့်ခြင်း လိုက်ပါလေ့ရှိသည်။
Intimate ရင်းနှီးသော။ ရင်းချာသော။
accompanied by တွဲဖက်လိုက်ပါသည်။
A pat on the back ကျောကုန်းအားပုတ်သပ်သည်။
One-armed hug လက်တစ်ဘက်တည်းနှင့်ပွေ့ဖက်ခြင်း
Place just one hand around the other person [instead of the traditional two). This is often used by people who are carryingabag in one hand, or who are just too lazy to use both arms.
အထက်ပါကဲ့သို့ နှစ်ဘက် မသိုင်းဖက်ဘဲ လက်တစ်ဘက်တည်းနှင့်သာပွေ့ဖက်သည်။ ၄င်းအား လက်တစ်ဘက်တွင် အိတ်ကိုင်ထားသည့်သူများ၊ လက်နှစ်ဘက်သုံးရမှာ အပျင်းကြီးသည့်လူများက သုံးကြသည်။
Air hug ဟန်ပြပွေ့ဖက်ခြင်း
Place your arms around the other person, but make no physical contact. This is ideal For those who are worried about germs and bacteria or catchingadeadly disease.
မိမိလက်မောင်းအားအခြားသူကိုသိုင်းဖက်ဟန်ပြုသော်လည်း တစ်ကယ်တမ်းခန္ဓာကိုယ်ခြင်းထိတွေ့မှု မရှိပါ။ ၄င်းသည် ပိုးမွှား၊ ဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့် ရောဂါများ ကူးစက်မှာ စိုးရိမ်သည့် လူများအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Bear hug ၀က်ဝံဖက်နည်း
Throw your arms around the other person, hold them ﬁrmly and proceed to squeeze as hard as you can. Bears do it, apparently!
မိမိလက်မောင်းအားအခြားသူကို သိုင်းဖက်လိုက်ပါ။ ခိုင်မြဲစွာဖက်ရင်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ညှစ်ကာ ဖက်ထားပါ။ ၀က်ဝံများကတော့ သည်အတိုင်းလုပ်တတ်ကြသည်။
Squeeze ဖျစ်သည်။ ညှစ်သည်။
Kiss on the cheek ပါးပြင်ပေါ်ဖွဖွနမ်းခြင်း
Kissing is becoming increasingly popular asaform of greeting in the UK. In most situations, one kiss is sufficient, although some people will kiss on both cheeks, and others may even offer three (in true French style!) A single kiss is also known asa"peck on the cheek".
ယူကေနိုင်ငံတွင် နှုတ်ခမ်းဖြင့်နမ်းခြင်းသည် တစ်နေ့တစ်ခြား ခေတ်စားလာနေသည်။ အခါများစွာတွင် တစ်ခါနမ်းရုံနှင့်လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့လူများက ဘယ်ပြန်ညာပြန် ပါးနှစ်ဖက်စလုံးအား နမ်းသည်လည်းရှိသလို အချို့ကတော့ ပြင်သစ်စတိုင် သုံးခါနမ်းပေလိမ့်မည်။
တစ်ခါတည်းနမ်းခြင်းအား “ပါးပြင်ပေါ်ခပ်ဖွဖွနမ်းခြင်း” ဟုသိကြသည်။
Peck (ကြက်၊ ငှက်) ဆိတ်သည်၊ ပေါက် သည်၊ တောက်သည်။
"peck on the cheek" “ပါးပြင်ပေါ်ခပ်ဖွဖွနမ်းခြင်း”
High ﬁve လက်ဝါးခြင်းရိုက်နှုတ်ဆက်ခြင်း
Raise your hand in the air with your palm facing towards the other person, and allow that person to hit their open palm against yours. Accompany the high ﬁve with the words "High ﬁve!"
ယခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်များကြားတွင်ပါခေတ်စားလာသော လက်ဖ၀ါးခြင်းထောင်ရိုက်နှုတ်ဆက်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ပြောတာ တစ်ယောက် သဘောတူညီမှုကိုပြသည့်အခါ သုံးလေ့ရှိသည်။
မိမိလက်ဖ၀ါးသည် တစ်ဘက်လူအားထံမျက်နှာမူလျက် လက်အား လေထဲတွင် မြှောက်ကာ သူ့လက်ဖ၀ါးနှင့်ခပ်စပ်စပ် ရိုက်ပုတ်နှုတ်ဆက်ရသည်။ ပါးစပ်ကလည်း “High five!” ဟုပြောဆိုလေ့ ရှိသည်။
Accompany လိုက်ပါသည်။ တွဲဖက်သည်။
Fist bump လက်သီးဆုပ်ထုခြင်း
Makeafist and knock it against the other person’s.
Knuckle bump/ Knuckle knock လက်သီးဆုပ်ခြင်းတေ့ခြင်း
This is the variation of the fist bump. However, instead of knocking fists, you bang knuckles.
သူသည်လက်သီးဆုပ်ထုခြင်းပုံစံကွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လက်သီးဆုပ်ခြင်းထုသည့်အစား လက်ဆစ်များအခြင်းခြင်း တိုက်ကာနှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
Variation မူကွဲ၊ အမျိုးကွဲ
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 24, 2014 at 15:33
Permalink Reply by aungnaingthu on October 24, 2014 at 17:11